Izingane sezingajola ngokukhululeka - Ijaji | isiZulu
Izingane sezingajola ngokukhululeka - Ijaji
Lizoqulwa kabusha icala elamiswa
Uzotalajwa owenze ucansi engashadile
Pretoria - Akusasilo icala ukuthi izingane eziseminyakeni yobudala ephakathi kuka-12 no-16, zingazitika ngezinto ezifana nokuqabulana, ukupotozana nocansi, kusho ijaji eNkantolo eNkulu ePitoli.
Ujaji uPierre Rabie ukhiphe lesi sinqumo kulandela isicelo esafakwa enkantolo ngenyanga ka-Ephreli, sifakwa ngabakwaTeddy Bear Clinic for Abused Children besekwa ngabeCentre for Child Law, bekhalaza ngezigaba ezithile ngaphansi kweSexual Offences Act.
Umbiko wePretoria News uthi izinhlangano lezi bezikhala ngokuthi umthetho uholela ekutheni amantombazane amaningi akhulelwe futhi angayi emitholampilo futhi angazihushuli izisu noma ethanda, ngoba esaba ukuthi azothathelwa izinyathelo zomthetho.
Izinhlangano bezifuna inkantolo ikhiphe izigaba ezithile kulo mthetho, zithi umthetho uthunaza isithunzi sezingane.
Isicelo besiphikiswa nguNgqongqoshe woMnyango wezokuVikela kanye neHhovisi likaMqondisi wokuShushiswa koMphakathi.
UMnyango wezobuLungiswa ukhale ngokuthi lesi sinqumo sizokhuthaza ukukhulelwa kwezingane ezingaphansi kweminyaka engu-16 ubudala.